UniProyecta - Mmụta maka afọ niile
Ndewo ezigbo onye na -agụ akwụkwọ, anyị na -anabata gị UniProyecta. Ebe a anyị chere na agụmakwụkwọ na ọdịbendị kwesịrị ịbụ n'efu maka mmadụ niile, nwoke ma ọ bụ nwanyị, nwata ma ọ bụ okenye. Ya mere, na ibe a ị ga -ahụ ihe omuma na anyị na -achịkọta n'ụdị akụkọ iji nyere gị aka na ọzụzụ gị. Ọ bụrụ na ị maghị otu esi achọta ihe ị na -achọ, anyị ga -enyere gị aka na nchịkọta dị mkpirikpi nke ihe ị ga -ahụ na saịtị a.
Mụta asụsụ French
Otu n'ime ike anyị bụ asụsụ French, nke anyị mụtara ekele maka akwụkwọ na njem anyị France na Canada. Na ngalaba a anyị na -akuzi nkuzi maka ọkwa niile: site na onye mbido ruo n'ọkwa dị elu.
Nkọwapụta French: kedu ihe ha bụ?
Njikọ French: ndepụta na atụ
Taa, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịchọ ihe ọmụma nke Bekee. N'ime telivishọn, netwọk mmekọrịta na egwuregwu vidiyo ị ga -ahụ ngalaba ma ọ bụ okwu ewepụtara na Bekee. Ya mere, anyị akwadebela akụkọ ndị a ịmụta bekee ma melite ọkwa gị.
Ngwaa ngwaa in English
Adjectives iji kọwaa mmadụ na bekee
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ bụghị ha niile bụ Bekee ma ọ bụ French, enwere ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ mara mma ma baa uru ịmụ. Russian, Chinese, Japanese ma ọ bụ Ịtali bụ naanị ihe atụ nke ihe anyị kwadebere.
Nọmba Arabic sitere na 1 ruo 1000
Njikọ German: ndepụta na ihe atụ
Anyị na -atụgharị ugbu a na ngalaba ọdịbendị, ọkachasị anyị ga -elele mmalite nke anyị, Gris oge ochie. Ọ dịghị ihe dị mma karịa akụkọ ọma nke chi na ndị dike iji kpochapụ uche ma soro ndị nna nna anyị mụta ihe.
Echiche Ụgha Grik Maka Ụmụaka
N'ikpeazụ, na ụdị a anyị na -etinye ihe niile na -enweghị ọnọdụ na ngalaba akọwapụtara nke ọma.
Ndị agha US
Na nke ahụ niile! Anyị na -atụ anya na ị ga -anụrị ọnụnọ gị UniProyecta Chetakwa na ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na iji fọm kọntaktị ma ọ bụ na ngalaba nkọwa na njedebe nke nkuzi ọ bụla. Ekele, netizen!